Graphic ပိုင်းမှာ iPhone X ထက်ပိုအားသာသွားတဲ့ Snapdragon 845 chipset များ – DigitalTimes.com.mm
823 Shares 247 Views
Graphic ပိုင်းမှာ iPhone X ထက်ပိုအားသာသွားတဲ့ Snapdragon 845 chipset များ
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမြင့်လာတာကစလို့ ပိုကောင်းလာတဲ့ graphic တွေနဲ့ Snapdragon 845 တွေကတော့ Android ဟန်းဆက်တွေမှာ နေရာယူပြိုင်ဆိုင်လာနိုင်တော့မယ့်အချိန်ပါ။ Samsung ကလည်း Galaxy S9 မှာ သုံးသွားမှာဖြစ်ပြီး LG, Sony, Xiaomi နဲ့တခြားသောဖုန်းတွေလည်း သိပ်မကြာခင်သုံးလာတော့မှာပါ။
Galaxy S8, LG V30, Xiaomi Mi6နဲ့ OnePlus 5T တို့မှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon 835 ထက်တောင် ပိုအားသာနေတဲ့ အခု Snapdragon 845 ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?? Snapdragon 835 နဲ့ Snapdragon 845 မှာဘာတွေကွာပြီး ဘာတွေသာသွားလဲဆိုတာ အောက်မှာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရအောင်..
ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာတော့ ဘာမှထူးထူးခြားခြားကြီးတိုးတက်လာတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ၂ခုလုံးက 10nm process နဲ့ပဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အခုတစ်ခေါက်က second generation ဖြစ်သွားပါတယ်။ performance ပိုင်းကတော့ စွမ်းအင်ကုန်နည်းနည်းသက်သာသွားတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ Qualcomm ကိုယ်တိုင်ကတော့ သူတို့ရဲ့ Spectra ကင်မရာနဲ့ Adreno graphic တွေက အရင်ဗားရှင်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ၃၀%တောင် သာသွားတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ ဗီဒီယိုရိုက်တာတွေနဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကိုဖွင့်တဲ့အခါတွေမှာ 835 တုန်းကနဲ့ယှဉ်ရင် တော်တော်ကြီးဘက်ထရီကုန်သက်သာလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
graphic ပိုင်းမှာ 20-40% တိုးတက်လာပြီး သုံးထားတဲ့ Adreno 630 GPU က benchmark ရလဒ်တွေမှာ iPhone X A11 chip ထက်ကို သာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အားလုံးခြုံနှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ Snapdragon 845 က 835 ထက် နည်းနည်းလောက်ပဲတိုးတက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Snapdragon 845 သုံးထားတဲ့ ဖုန်းတွေကို စောင့်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အောက်မှာတော့ စမ်းသပ်ထားတဲ့ benchmark ရလဒ်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
စှမျးဆောငျရညျပိုမွငျ့လာတာကစလို့ ပိုကောငျးလာတဲ့ graphic တှနေဲ့ Snapdragon 845 တှကေတော့ Android ဟနျးဆကျတှမှော နရောယူပွိုငျဆိုငျလာနိုငျတော့မယျ့အခြိနျပါ။ Samsung ကလညျး Galaxy S9 မှာ သုံးသှားမှာဖွဈပွီး LG, Sony, Xiaomi နဲ့တခွားသောဖုနျးတှလေညျး သိပျမကွာခငျသုံးလာတော့မှာပါ။
Galaxy S8, LG V30, Xiaomi Mi6နဲ့ OnePlus 5T တို့မှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon 835 ထကျတောငျ ပိုအားသာနတေဲ့ အခု Snapdragon 845 ရဲ့ အားသာခကျြတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ?? Snapdragon 835 နဲ့ Snapdragon 845 မှာဘာတှကှောပွီး ဘာတှသောသှားလဲဆိုတာ အောကျမှာနှိုငျးယှဉျကွညျ့လိုကျရအောငျ..
ထုတျလုပျမှုပိုငျးမှာတော့ ဘာမှထူးထူးခွားခွားကွီးတိုးတကျလာတာမြိုးမရှိပါဘူး။ ၂ခုလုံးက 10nm process နဲ့ပဲထုတျလုပျထားတာဖွဈပွီး အခုတဈခေါကျက second generation ဖွဈသှားပါတယျ။ performance ပိုငျးကတော့ စှမျးအငျကုနျနညျးနညျးသကျသာသှားတယျလို့ ဆိုလို့ရပါတယျ။ Qualcomm ကိုယျတိုငျကတော့ သူတို့ရဲ့ Spectra ကငျမရာနဲ့ Adreno graphic တှကေ အရငျဗားရှငျးတှနေဲ့ယှဉျရငျ ၃၀%တောငျ သာသှားတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဂရပျဖဈပိုငျးအဓိကလုပျဆောငျခကျြတှေ၊ ဗီဒီယိုရိုကျတာတှနေဲ့ ဝဘျဆိုဒျတှကေိုဖှငျ့တဲ့အခါတှမှော 835 တုနျးကနဲ့ယှဉျရငျ တျောတျောကွီးဘကျထရီကုနျသကျသာလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
graphic ပိုငျးမှာ 20-40% တိုးတကျလာပွီး သုံးထားတဲ့ Adreno 630 GPU က benchmark ရလဒျတှမှော iPhone X A11 chip ထကျကို သာနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ အားလုံးခွုံနှိုငျးယှဉျရငျတော့ Snapdragon 845 က 835 ထကျ နညျးနညျးလောကျပဲတိုးတကျလာတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ကဲ ဒါဆိုရငျတော့ သိပျမကွာခငျမှာပဲ Snapdragon 845 သုံးထားတဲ့ ဖုနျးတှကေို စောငျ့ပွီးစမျးသပျကွညျ့ဖို့ပဲ ကနျြပါတော့တယျ။ အောကျမှာတော့ စမျးသပျထားတဲ့ benchmark ရလဒျတှကေိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Bench markiphone X A11Qualcomm Snapdragon 845
SD-845, 18:9 ratio နဲ့ထွက်လာမယ့် Sony H8266
Xiaomi Redmi5Plus နဲ့ Mi 5X တို့ရဲ့ specification များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း